Aiza ireo trano fisakafoanana tokana manompo? | Martech Zone
Aiza ireo trano fisakafoanana tokana manompo?
Alatsinainy, 25 Jona, 2007 Alahady, Septambra 30, 2012 Douglas Karr
Indraindray aho manana hevitra amina miliara dolara. Mampalahelo (na soa ihany), tsy manam-bola hampiasa vola amin'ny hevitro lavitrisa dolara mihitsy aho. Manantena aho fa misy mandray ahy amin'ity.
Mavesatra loatra aho. Io dia fitambaran'ny fahazaran-dratsy mihinana sy fomba fiaina mipetrapetraka. Samy diso aho. Ary rehefa mivoaka hisakafo aho, na aiza na aiza alehako, lehibe ny haben'ny fanompoana. Na dia manafatra zana-kazo kely veggie aza aho, dia andiana 2 farafaharatsiny. Fantatrao ve fa ny salan'isa amerikana manompo amin'ny trano fisakafoanana dia momba 5 fotoana haben'ny asa fanompoana mahazatra? Ouch!
Tsy mila mihinana ny lovia sakafo manontolo aho, fantatro. Tokony hiaiky ianao fa tsy ho vita mihitsy ny manandrana manisa ny isan'ny servisy eo ambonin'ny lovia…. Hmmm.
Ka ity ny hevitro! Ny olona iray dia tokony hanomboka trano fisakafoanana antsoina hoe "Tolotra tokana". Azo antoka fa afaka mitafy ny anarana isika, angamba "Une Assiette" izay lehibe ny takelaka ary natao ho an'ny iray fotsiny ny tohiny. Mino aho fa misy antony vitsivitsy mahatonga ny rojo fisakafoanana toa izao hahomby:
Ireo lehilahy matavy toa ahy dia tsy maintsy mandeha misakafo atoandro mba hampisehoana fa manao ezaka isika.
Kely sakafo, vidiny mitovy! Tombony lehibe kokoa noho ny kilao izany.
Kely sakafo, mahandro haingana! Latabatra maro kokoa no amidy isan'ora.
Raha tsy nandeha nisakafo atoandro aho dia noteren'ireo olona mahia tao am-piasana handeha aho mba hanehoan'izy ireo fa miahy izy ireo. Toy ny rehefa manontany ahy izy ireo raha te handeha hitsangatsangana amin'ny sakafo atoandro aho. 😉
Orinasa maniry ny hihinanan'ny mpiasa salama dia tsy manafatra any amin'ny trano fisakafoanana toa izao.
Ho mora ny tagline an'ny Une Assiette, sa tsy izany? Tiako, “Sorohy ny Assiette goavambe miaraka amin'i Une Assiette!”. Ho an'izay tena mandray an'io hevitra io sy miara-dia aminy dia tiako ny fizarana sakafo mandritra ny androm-piainany.
Azafady mba asio tsindrin-tsakafo.
Thor Schrock: Mpilion-tserasera amin'ny Internet manaraka?
Jun 25, 2007 ao amin'ny 8: 54 PM
Izaho dia nanana hevitra niaraka tamin'ireto andalana ireto ihany, tsy dia matavy loatra. Ilay trano fisakafoanana dia nantsoina hoe Jack Sprats. Na izany na tsy izany dia tsy niasa aho. Izaho, ho rantsana aho raha mila mihazakazaka eo amin'ny fitoeran-tongotra hampandeha ny solo-sainako.
Jun 25, 2007 ao amin'ny 9: 20 PM
Salama, miaraka aminao amin'ny haben'ny fanompoana aho. Tsy haiko hoe maninona ny trano fisakafoanana no mieritreritra fa ny vehivavy mihinana toy ny tanana tantsaha aorian'ny andro be atao! Tiako ny servings kely misy fikasihana gourmet.
Azonao atao ny mampihena ny haben'ny vavoninao amin'ny servings kely.
Vaovao tsara indrindra azonao atao ny manao fanatanjahan-tena amin'ny alàlan'ny mandeha amin'ireo lavaka 18 amin'ny lalao golf!
Jun 25, 2007 ao amin'ny 10: 41 PM
haha .. tiako ny lahatsoratra ehm .. ny hevitra no tiako holazaina.
btw, raha afaka misakafo any amin'ny trano fisakafoanana matetika ianao dia azonao atao koa ny maka fotoana mankany amin'ny gym? 🙂
26 Jun 2007 amin'ny 8:05 AM
Tena marina ny anao! Raha ny marina dia tsy mila gym akory aho… baraok'omby fotsiny hamoahana ny vodiko hiala amin'ny seza ary handehanana. Izaho no miasa an'io. Toa arakaraka ny anoratako azy no vao mainka mandrisika ahy hanao azy.
Jun 25, 2007 ao amin'ny 10: 45 PM
Ho an'ny tsindrin-tsakafo dia afaka misafidy fonosana tsakitsaky 100 cal isan-karazany ao anaty lovia kely izy ireo mba ho toa bebe kokoa…
26 Jun 2007 amin'ny 5:37 AM
Isaky ny mitsidika an'i Etazonia aho dia mametraka antsasaky ny vato ao anatin'ny herinandro. Niasa tao NY nandritra ny 3 herinandro aho (tamin'ny lohateny fandefasana GBA) ary nisotro zava-pisotro maimaimpoana izy ireo ary rehefa nandidy zana-tsokajy lehibe aho dia nijery endrika mahatsikaiky, nivadika izany ary nianiana aho fa hanome fianakaviana 5!
Tiako ny sakafo fa ny anao havanana Doug satria ny haben'ny habeny dia miteraka faminaniana manatanteraka ny tenanao.
Fa tsy maintsy milaza aho fa tena malahelo an'i Twinkies aho! Andriamanitra andevozin'izy ireo tokoa. Saingy mofomamy ny mofonao, tsy misy mofo mihintsy? inona daholo izany?
26 Jun 2007 amin'ny 8:09 AM
Mofo mangatsiaka dia sarotra be ny mahita azy! Heveriko fa Mofo Panera no fitifirana akaiky indrindra… ny supermarket izay minono fotsiny.
Manalavira ireo Twinkies ireo! Mieritreritra aho fa mety mitazona ny tsiambaratelon'ny famonoana olona taloha izy ireo!
26 Jun 2007 amin'ny 5:52 AM
Manaiky tanteraka aho! Imbetsaka aho no nieritreritra an'io fa tsy nieritreritra ny hanana trano fisakafoanana natokana ho an'ny tolotra tokana (hevitra tsara). Ary eo amin'ny pejy mitovy amiko ianao. Tsy raharahako akory raha toa ka mitaky vidiny mitovy amin'ny sakafo feno ny trano fisakafoanana. Omeo sakafo kely fotsiny aho !!
26 Jun 2007 amin'ny 9:27 AM
Toa anao no mety ho mpitondra tenin'ny Subway manaraka, na tsia. Raha ny marina dia fantatro fa nanangana ny mizana tamin'ny 30 kilao mahery aho. Saingy tsy hihinana ao amin'ny trano fisakafoanana misy anao velively aho. Miasa mampihena lanja ao an-trano aho. Rehefa mivoaka aho dia tsy misy varavarana intsony. Tsy maintsy miala voly indraindray.
Jun 26, 2007 ao amin'ny 12: 53 PM
Ny olako dia mahafinaritra isan'andro, Lewis! 🙂
Ny olana iray eto Indy dia ny tototry ny trano fisakafoanana sy fivarotana lehibe. Tsy afaka mieritreritra 'fivarotana an-jorony' miaraka amin'ny sakafo vaovao aho ahafahako mandray sakafo hariva mahasalama handrahoana izany alina izany. Ary - miaraka amin'ireo gadra rehetra, dia saika tsy misy trano fisakafoanana manokana eto.
Malahelo mafy an'ireo trano fisakafoanana Vegetarian be any Andrefana aho izay 'Mom & Pop' izay ahafahanao mahazo sakafo matsiro miaraka amin'ny ampahany antonony. Tsy lafo koa izy ireo.
Zavatra tsy maintsy ataoko manaikitra fotsiny ilay bala ary handrisika ahy. Fialan-tsiny ampy! Vitako io raha manandrana aho.
Nathania Johnson - efitrano fandraisam-bahiny mahazatra
26 Jun 2007 amin'ny 9:50 AM
Rehefa lamaody lehibe ny sakafon'ny Atkins dia nanana hevitra ho an'ny trano fisakafoanana misy karbaona ambany aho. Ahitana lovia miaraka amin'ny akoho, trondro ary steak, fa tsy french fries dia hahazo kitapo karaoty ianao. Izy io dia tsy hanome afa-tsy Diet colas, divay, rano (tsy misy zava-pisotro mamy). Ary ho an'ny tsindrin-tsakafo, dia mety hanana voaroy mifangaro amin'ny crème whipped.
Izaho koa dia nanana hevitra, izay heveriko fa vita ankehitriny, ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny sakafo. Mandeha fitsangantsanganana ianao, izay misy ny zava-drehetra. Ary sakafo ara-pahasalamana ihany no ananany. Azonao atao ny mihaona amin'ireo mpahay sakafo sy mpampiofana ary na mitsambikina na mitazona ny sakafonao. Heveriko fa fotoana fialantsasatra hohanin'ny olona ny fialan-tsasatra, ka izany dia fomba iray hialana tsy hidiran'ny ratra.
Jun 26, 2007 ao amin'ny 6: 43 PM
Tsy mila miahiahy momba ny ampahany mavesatra kokoa any amin'ny trano fisakafoanana ao amin'ny sehatry ny fandanjalanjana b / c sambatra aho fa manana metabolisma haingana be. Na izany aza, ny fihinanana ampahany betsaka amin'ny sakafo no mahatonga ahy ho kamo be tsy mahita torimaso. Raha mbola noana aho dia afaka mahazo bebe kokoa amin'ilay takelaka “manompo”. Tsaboiko fotsiny ny lovia sakafo omena ahy ho lovia fandrosoana ary hitako fa matetika dia manana ny ampy entina mody any amin'ny sakafo iray farafahakeliny.
Jun 26, 2007 ao amin'ny 11: 23 PM
Fomba iray hafa hiasan'io ny fametrahana ny fahitalavitra fisakafoanana amin'ny fantsom-bibidia… Izany dia nitranga tamiko teo amin'ny toerana Tai tiako haleha. Tsy misy hamono haingana ny fahazotoan-komana noho ny tsy maintsy hijerena voromahery amin'ny fatin'ahitra rehefa MANDRAY hihinana…
Jun 28, 2007 ao amin'ny 2: 23 PM
Manana hevitra mahafinaritra hafa aho. Maniry aho raha te hanana tobim-pisakafoanana nasionaly misy trano fisakafoanana mpanaramaso. Hihinana eo tanteraka aho. Raha afaka mankany amin'ny trano fisakafoanana iray izay nahalala nahandro sakafo marina aho, araka ny rafitra nomen'ny Weight Watcher Recommended dia heveriko fa mety hahavery kilao an'arivony isan-minitra ity firenena ity.
Very 10 lbs teo ho eo ny mpanara-maso ny lanjako ankehitriny ary mieritreritra aho fa raha nanana izany safidy izany aho dia hanao fety fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny zanako any (rehefa manana azy ireo aho) mba hahafahan'izy ireo mankafy sakafo tsy misy tavy na tavy ambany mandritra ny fety. tsy misy vatomamy sy mofomamy ary hamburger matavy avy any Mc Donalds, tiako koa ny faritra ho an'ny ankizy.